Fanamboarana nomerika | Prototypes & faritra famokarana ambany - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
MOMBA ANAY / Iza isika
Createproto dia natsangana tamin'ny Jona 2008 ny Simon Lau, injeniera mekanika izay te-hampihena ny fotoana nilainy hahazoana faritra prototype plastika vita amin'ny tsindrona. Ny vahaolana narosony dia ny fanodinana automatique ny fizotry ny famokarana nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny famolavolana rindrambaiko sarotra mifandraika amin'ny tamba-jotra fikosoham-bary. Vokatr'izany, ny plastika sy ny vy dia azo novokarina tamin'ny ampahany kely tamin'ny fotoana nandraisany azy teo aloha. miaraka amin'ny fikasana hampihorohoro ny fisainana mahazatra ao amin'ny tontolon'ny famokarana. Na dia nanitatra ny asa nataontsika eran'izao tontolo izao aza isika dia mbola mitondra antsika hatrany io fanahy io. Ny mpikambana ao amin'ny ekipan'ny mpitarika anay dia manolo-tena hanohitra ny satan'ny quo amin'ny tolotra tsy miato hanatsarana ny fomba fanompoana ny mpanjifanay.
Nandritra ny folo taona ho avy, nanohy nanitatra ny valopy fanaovan-tsindrona izahay, nampiditra ny milina CNC haingana.
Tamin'ny taona 2016, nandefa serivisy fanontana 3D ambaratonga indostrialy izahay mba hahafahan'ny mpamolavola vokatra, mpamolavola ary injeniera làlana mora kokoa hifindra amin'ny prototyping voalohany ka hatramin'ny famokarana ambany.
Ny fahitana - Hanatsorana ny fizotran'ny manufacuring nefa tsy manimba ny kalitaony.
NY MISIONA - Manome ny fandefasana vokatra avo lenta avo lenta ho an'ny mpanjifantsika manerantany.
Ny sasany amin'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany dia mitodika any amintsika rehefa mila faritra mora vidy sy vita amin'ny fomba voafaritra tsara izy ireo. Ary tsy hoe fotsiny satria mahafinaritra antsika ny miara-miasa. Izy io dia satria nofaritantsika ny fanamboarana notsorina.
MANDROSO NY BUSINESS ISIKA ISIKA
Ao amin'ny Createproto dia tianay ny milaza fa tsy fivarotana asan-drainao ianao. Nesorinay ny sakana toy ny mahazatra - ny fotoana nitarina hatry ny ela, ny teknika efa tonta, ny fizotrany tsy azo ovaina, ny kalitao tsy azo itokisana — hampifantohana anao ny asanay manontolo: ny filanao, ny mombamomba anao, ny teti-bolanao ary ny fotoanao.
Ny ekipan'ny varotra sy ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika dia misy manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 6:30 hariva CST, Alatsinainy ka hatramin'ny Zoma, mba hanampy amin'ny baiko sy hamaly ny fanontaniana rehetra momba ny serivisinay. Azonao atao koa ny mifandray aminay amin'ny Internet amin'ny fotoana rehetra.
Fanampian'ny orinasa: tranobe faha-3, làlana Tanglian 3, Tanànan'i Tangxia, Dongguan, 523710 Sina.